आमिरको करिअरकै ब्लकबस्टर बन्यो ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’, बनायो यस्ता ५ रेकर्ड ! - Koshi Online
शनिबार, कार्तिक २४, २०७५ मा प्रकाशित
आमिरको करिअरकै ब्लकबस्टर बन्यो ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’, बनायो यस्ता ५ रेकर्ड !
विराटनगर, कात्तिक २४
बलिउड अभिनेताद्वय आमिर खान र अमिताभ बच्चन तथा अभिनेत्रीद्वय फातिमा सना शेख र कट्रिना कैफ अभिनित फिल्म ’ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ ८ नोभेम्बरमा प्रदर्शनमा आयो । यस फिल्मलाई फिल्म समीक्षकको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आयो । फिल्मले पहिलो दिनमै रेकर्ड ब्रेक कमाई गर्यो ।
गत बिहीबार नै फिल्मले कुल ५२.२५ करोड कमाएको छ । यति मात्र नभएर फिल्मले पहिलो दिनको कलेक्शनका साथ धेरै रेकर्ड पनि आफ्नो नाम गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै स्क्रिन्समा प्रदर्शन
यस फिल्मलाई ग्लोबली करीब ७ हजार स्क्रिन्समा रिलीज गरिएको थियो । यसभन्दा पहिले ‘बाहुबली २’ लाई दुनियाँभरमा ६ हजार ५ सय पर्दामा देखाइएको थियो ।
पहिलो दिनमा नै सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म
तीन भाषा हिन्दी, तमिल र तेलुगुमा रिलीज भएको यस फिल्मले पहिलो दिन ५२.२५ करोड कमाई गरेको थियो । यसका साथै यस फिल्मले हिन्दी फिल्महरुको कलेक्शनमध्येमा पहिलो स्थान बनाएको छ ।
२०१९ का फिल्महरुमध्ये पहिलो दिनको कमाई:
ठग्स अफ हिन्दोस्तान– ५२.२५ करोड
सञ्जु– ३४.७५ करोड
रेस २– २९.१७ करोड
गोल्ड– २५.२५ करोड
बागी २– २५.१० करोड
तिहारमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म
आमिर खानको यस फिल्मले पहिलो दिन ५२.२५ करोड कमाउँदै तिहारको मौका पारेर रिलिज भएको फिल्महरुमध्ये सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ । यसअघि तिहारको मौकामा रिलीज भएको शाहरुख खानको फिल्म ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’ लाई पछि पारेको छ । शाहरुखको सो फिल्मले सुरुआतको दिनमा ४४.९७ करोड कमाएको थियो । अब यो रेकर्ड आमिरको यस फिल्मले पाएको छ ।
यशराज ब्यानरमा सबैभन्दा ठूलो फिल्म
‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ करीब भारतीय रुपैयाँ २ सय ४० करोडको बजेटमा बनेको हो । यो यशराज ब्यानरको साथ–साथ बलिउडको पनि सबैभन्दा ठूलो बजेटको फिल्म बताइएको छ । यसअघि यसै ब्यानरबाट निर्माण भएको सलमान खानको ‘सुल्तान’लाई पछि पार्दै आमिरको यस फिल्मले रेकर्ड बनाएको हो ।
आमिरको आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ
आमिर खानले नै आफ्नो रेकर्ड तोडेका छन् । आमिरको यसअघिको फिल्म ‘धूम ३’ को रेकर्ड तोड्दै यस फिल्मले सुरुवाती अग्रता बनाएको हो । ‘धूम ३’ ले ४६.२२ करोड कमाउँदा ‘दंगल’ने पहिलो दिन २९.७८ करोड कमाएको थियो भने ‘पीके’ ले पहिलो दिन २६.६३ करोड ओपनिङ कलेक्सन गरेको थियो ।